UNkulunkulu Uwulawula futhi Uwuphatha kanjani Umhlaba kaMoya | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
5 Wezihloko Zobufakazi
Uyini umhlaba kamoya? Mangikuphe incazelo emfishane futhi elula nje. Umhlaba kamoya uyindawo ebalulekile, uwumhlaba ohlukile emhlabeni wezinto ezibambekayo. Ngisho kanjani ukuthi ubalulekile? Sizoxoxa ngakho kabanzi lokh…
Masiqale ngokufa nokuphila kwabangakholwayo. Emva kokuthi umuntu afe, uthathwa asuswe ahanjiswe yisithunywa esivela emhlabeni kamoya. Sizothi yini yakhe esuswayo? Akuyona inyama, kodwa umphefumulo. Uma ususwa umphefumulo…
Siqeda kuxoxa ngokujikeleza kokuphila nokufa esigabeni sokuqala, sabangakholwayo. Manje, make sixoxe ngesigaba sesibili, sabantu abahlukahlukene benkolo. “Ukujikeleza kokuphila nokufa kwabantu abehlukahlukene benkolo” na…
Okulandelayo, masikhulume ngokujikeleza kwempilo yokuphila nokufa kwalabo abalandela uNkulunkulu. Lokhu kuthinta nina, ngakho lalelani. Okokuqala, cabangani ngezigaba abantu abakholwa wuNkulunkulu esingabehlukanisa ngazo…
Ukubhekisa emhlabeni kamoya, uma abehlukahlukene kwabaphilayo benza okungafanele, uma bengawenzi umsebenzi wabo ngendlela eyiyo, uNkulunkulu unayo imithetho ehambisana nalokho emithethweni yasezulwini enemiyalelo alungis…